Kubata kwe iPhone yako X kunokundikana dzimwe nguva here? Apple inotangisa chirongwa chekugadzirisa | IPhone nhau
Kubata kwe iPhone yako X kunokundikana dzimwe nguva? Apple inotangisa chirongwa chekugadzirisa
Vamwe vashandisi vandinoziva vave vachitambura nedambudziko risinganyanyo kutsamwisa kana zvakajairwa, asi varipo muiyo iPhone X nenzira chaiyo chaiyo. Dzimwe nguva iPhone X skrini haisi kupindura zvakanaka mune dzimwe nzvimbo dzekudyidzana, kunyanya kana isu tiri kushandisa iyo keyboard zvakanyanya kushingairira.
Apple inoziva dambudziko uye inotangisa chirongwa chekutsiva chevashandisi vanosangana nenyaya dzekunzwisisa pane iyo iPhone X. Tichave tichiziva zvishoma zvakadzama izvo Apple inotarisira nechirongwa ichi uye kana iPhone yedu inogona kutambura nedambudziko iri.
Unogona kusangana paApple webhusaiti kubudikidza nechisungo ichi Nekudaro, zvese zvese nezve chirongwa chekutsiva hachina kuona chakakodzera kuti chishandurirwe muchiSpanish parizvino, saka isu tichazongo chengeta yakakosha.
Apple yakafunga kuti mamwe maXs X angave ari kusangana nekubata kwekunzwa nyaya pazviratidziro zvavo nekuda kwechinhu chinokundikana cheiyo module yekuratidzira.
Kuti yako terminal iiswe mune ino yekutsiva chirongwa inofanirwa kupa anotevera matambudziko pachena:
Iyo skrini kana chikamu cheiyo skrini nguva pfupi haipindure kune mushandisi kubata.
Iyo skrini inobata kunyangwe isu tisina kumbobata pairi
Aya ndiwo maitiro anoenderera mberi Apple kutsiva iwo ma skrini zvizere (pamwe nemojuru yawo) yevashandisi vanokanganiswa nema module akashata. Kuti uite izvi, unogona kushanyira iri pedyo neApple Store kana chero yehunyanzvi sevhisi inogamuchirwa nekambani kubva nhasi. Saka Apple inopindura iyo yegumi nemana yekugadzira mhosva inoratidzwa pane yekambani smartphone, saka Kana yako skrini ikatadza, usarasikirwa nemukana wekuitsiva zvachose mahara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Kubata kwe iPhone yako X kunokundikana dzimwe nguva? Apple inotangisa chirongwa chekugadzirisa
Bastian pavez akadaro
Ah zvangu, ndakaenda kuChile mushure memavhiki maviri ekutenga. Ndakaenda nayo kusevhisi yeapuro uye ivo vakachinja skrini. Hapana chimwe
Kana uchida, ndinogona kukutumira vhidhiyo kuti ubudise. Asina kana kubata skrini, akazvinyora !!
Pindura Bastián pavez
Iyo Express Kutsiva uye mutsauko uripakati peyakagadziriswazve uye zvakajairwa iPhone
Iyo ECG yeApple Watch inogona kushandiswa muSpain nekushandura dunhu